Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo ukugcina ixesha nge-Illustrator | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo ukugcina ixesha nge-Illustrator
Xa Saqala ukusebenza ngenkqubo ku funeka qhelana ngayo kwaye wenze ibar yesixhobo ukuze ikhululeke ngakumbi kuthi ukuba sisebenze.
Njengokuba sisebenza kwaye sithumela izinto lula siya kuqaphela ukuba kukho izixhobo esizisebenzisa rhoqo. Ngenxa yeso sizathu, sikufundisa Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo for yonga ixesha elininzi kangangoko.
Xa usebenza kuyilo lwegraphic i Umzekeliso yinkqubo ebaluleke kakhulu. Inkqubo ye- ixesha lixinene kakhulu kwaye kufuneka songe ixesha apho sinakho. Ukuthetha kakuhle ekusingatheni iindlela ezimfutshane zekhibhodi kunokuba yinto ephambili ekugqibeni imisebenzi oyinikiweyo ngexesha.
1 Gcina ixesha usebenza noMzekeliso
2 Utshintsho lwesikhombisi
3 Ukunquma imaski
4 Ukuhambisa ubugcisa bokugqibela
5 Iindlela ezimfutshane ezimfutshane
Gcina ixesha usebenza noMzekeliso
Emva koko siya kushiya i Uluhlu lweendlela ezimfutshane ukuba ngokuziqhelanisa siya kuba nakho ukukhumbula ngaphandle kokuyeka ukucinga.
Ukuqala, i utshintsho lwesikhombisi (Umnyama nomhlophe) ihlala ihleli. Ukuthetha ngokubanzi, umnyama ukhetha lonke iqela, ngelixa elimhlophe lisetyenziselwa izinto ezithile okanye ukuguqula iivenkile. La ngamaqhosha ekufuneka sicofe ngaxeshanye kwenye nenye:
Isalathiso esimnyama: V
Isikhombisi esimhlophe: A.
La ukucofa imaski sisixhobo esisesinye esineflegi kwi-Illustrator. Ngayo sinokufihla iinxalenye zemifanekiso okanye sinqumle phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Imaski yokuCima: i-CMD + 7
Ukuhambisa ubugcisa bokugqibela
Xa usenza i- ubugcisa bokugqibela zonke iitekisi mazibe njalo ifakiwe ngaphambi kokuzithumela ukuba zishicilele. Endaweni yokuhamba nganye nganye, eyona ndlela ikhawulezayo nelula kukukhetha yonke i-artboard kwaye ucofe la maqhosha alandelayo:
Vectorize: I-CMD + SHIFT + O
Iindlela ezimfutshane ezimfutshane
Ir ukugcina iprojekthi yethu kubalulekile ukunqanda ukucaphuka. Xa sisebenze iiyure ezininzi okanye sisebenzisa imifanekiso enzima, ayothusi into yokuba ikhompyuter yethu ibe ngumkhenkce. Asizukuba ngabokuqala ukuphulukana nawo wonke umsebenzi owenziweyo ngokungasebenzi kwaye sigcine ifayile rhoqo. Kulula ukungena kumkhwa wokuyigcina ukuba ayikokuchitha ixesha. Ngamaqhosha alandelayo iiprojekthi zethu ziya kukhuseleka.
Gcina ifayile: CMD + S
Kwimeko apho besingalunganga kwaye sifuna ukulungisa Singayenza ngokucinezela indibaniselwano elandelayo:
Hlehlisa isenzo: CMD + Z
Kuya kufuneka siziqhelanise nayo, kuyinto eqhelekileyo ukuba ekuqaleni awukhumbuli onke amaqhosha. Icebo elinye kukuba zenzele iphepha lokukopela ecaleni kwescreen ngazo zonke iindlela ezimfutshane. Kuya kubakho umhla oya kuzisebenzisa ngaphandle kokuqonda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo ukugcina ixesha nge-Illustrator
Ngokukhawuleza yenza ii-vector ezibonakalayo ezintle ngoncedo lukaMarc Edwards
Ubusika bemilingo iTokyo kunye nokufota kukaYuichi Yokota